အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေတောင်းဆို — မြန်မာဌာန
အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေတောင်းဆို
နိုင်ငံရေးပါတီ ၁ဝ ဖွဲ့ ပေါင်းစည်းထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေပါတီများက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ခွင့်ပေးဖို့ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပဒေတရပ် ပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အခု တောင်းဆိုမှုကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးကနေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ (UDP) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းတင်အောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေပါတီများကို ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ စုစည်းထားတာပါ။
အခု တောင်းဆိုမှုကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ (NDF)၊ ဒီမိုကရေစီပါ တီ (မြန်မာ)၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP)၊ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ (UDP)၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP)၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီ (CNP)၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁ဝ ခုက တောင်းဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးထပ္လုပ္တဲ႔သူေတြကို ထပ္ျပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်ထားဖို့အစီအစဥ္ေတြ ရွိေနပါတယ္
I dont understand all those political parties that why still demanding like that. Because even all known that this military government still lying and cruel to the people. I know all of you getting some profit from this junta and then saying like that. I know you all can't escape from this military government except cheating by them. Only the way is massive marching of all people against this junta. I will suggest to all ethnic group fighting in your place, better lead in front of marching people, sure when you all lead people will follow.